> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado Notes ka Xaday iPhone, iPad ama iPod Touch
Waxaan soo kaban karaa qoraalada ku iPhone iiga soo xadday ka computer?
Oday ah iPhone la xaday iga markii aan safarka ahaa. Aan si joogto ah synced telefoonka via Lugood on my laptop, mashiin Windows 7. Sidee ayaan u soo kaban karto, qoraalada wax ka Lugood on laptop ah? Ma jiraa qalab kaas oo kaa caawin doona i bogsii, alaabtii this?
Sida aan ognahay, gurmad Lugood ee file waa nooc ka mid ah file SQLitedb ah in aadan u arkaan kara waxa ku qoran waxaa ka mid ah, iskaba daa qaadan xogta ka soo baxay waxaa ka mid ah. Si aad xog ka heli, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan yihiin qalab cid saddexaad oo u soo saaro karo. Dabcan, waxaa jira qalab sida oo awood aad ka bogsato note on your xaday iPhone, iPad ama iPod xiriiri on laptop ah. Halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) .
Download version maxkamad free hoos ku qoran in ay isku dayaan oo bilaash ah! The version Windows sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan xogta laga qalab aad. Si aad u soo saaro Lugood gurmad file, waxaad dooran kartaa version kasta oo: iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1 ama iPod xiriiri 4. Dhammaan iyaga ka mid ah waxa ay si fiican u samayn kartaa.
Talaabada 1: Dooro gurmad Lugood qalab aad u iskaan
Dadka isticmaala Mac, abuurtaan barnaamijka oo waxaa jira laba hababka soo kabashada Doorashadaada. Inaad doorato "kabsado Lugood ee kaabta File". Dhammaan gurmad files Lugood qalabka macruufka aad waxaa lagu soo bandhigaa halkan. Mid ka mid ah u qalab aad Dooro oo guji "Start Scan" Macdan gurmad ah.
Wixii Windows users, bandhigista Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) oo taga si ay "ka soo kabsado Lugood ee kaabta File" doorasho dusheeda. Halkan waxa kale oo aad ka heli kartaa liiska Lugood gurmad file qalabka macruufka aad. Choos ah mid ka mid ah la soo xaday iPhone oo guji "Start Scan" in futher tagaan.
Talaabada 2: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan qoraalada laga xaday iPhone, iPad ama iPod taabashada
Marka scan ka baxayo, dhammaan xogta ku gurmad Lugood faylka la soo saaro doonaa oo soo bandhigay qaybaha. Waxaad ku eegaan karo mid kasta oo iyaga ka mid ah si faahfaahsan. Wixii qoraalo, dooro qaybta "Xusuusaha" dhinaca bidix ee suuqa. Waxaad ka akhrisan kartaa nuxurka detailedly. Mark uyiri aad rabto in aad soo kabsadaan oo aad ku badbaadin karto on your computer adigoo gujinaya "Ladnaansho" button.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone ee macruufka sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah baarista iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1 ama iPod xiriiri 4 inuu ka soo kabsado xogta lumay waxaa ku. Just sameeyo hab kabashada ee "soo kabsado Device macruufka ah".
Top 10 Apps waab Photo u iPhone
Copyright © > Wondershare. Dhammaan xuquuq dhowran.